နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: New System in MRT
ရေးသားသူ Ko Boyz at 4:55 PM
MRT မှာ ကြေညာသံကြားနေရပေမယ့်
စကားအမျှင်မပြတ်ပြောရင်း ပြောင်းပြန်တက်စီး၊ ၂ ဘူတာ
လွန်လောက်မှ ကြားပြီး ရထားပြန် ပြောင်းစီးရသူများအတွက်
NangNyi January 9, 2009 at 6:18 PM
:P January 9, 2009 at 6:20 PM
ကဘ.. အပေါ်ဆုံးက shwenyi ဆိုတာ နာနော်...
ဂျီမေးမှာ ကိုယ့်အကောင့်မဟုတ်တာ သတိမထားလိုက်မိလို့...။ :D
ksanchaung January 9, 2009 at 9:33 PM
ဟိုက်။ ရှာလပတ်ရည်။ MRT = Mass Rapid Transport ဆိုပါလား။ နေ့လည်က ညီတစ်ယောက်က မေးတယ်။ “အကို။ MRT ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ” တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ကြုံတုန်း ဘာရမလဲ။ “ဟဲ့ကောင်။ Poly ကျောင်းသားလုပ်ပြီး ဒီလောက်တောင် ညံ့ရလား။ Ministry of Railway & Transport ပေါ့ကွ” လို့ ဟောက်စားလုပ်လိုက်မိတာ။ သွားပါပြီ။ မရှိတဲ့ အရှက်တော့ကွဲပါပြီ။
Ko Boyz January 10, 2009 at 12:46 AM
- ဆင်ထုံအတွက် အထူး စပါယ်ရှယ်တယ်လီပသီ လက်တို့နည်းကို ဘကုန်းကုလားများမှ တီထွင်ပေးလိမ့်မည်။
- ငယ်တယ်ကြီးတယ် ပဓါန မဟုတ်ပါ။ အရည်အချင်းသည်သာ အဓိက ဖြစ်ပါသည် နန်းညီ။ (နာတွ... တော်သွားပြန်ပြီ)
- ကိုကေ.. ကိုကေ့၏ လျှပ်တစ်ပြက် တင်္ခဏုပ္ပတ္တိ ညဏ်ကို အထူးပင် လေးစားမိပါသည်။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ဟုတ်သလိုလိုပင်...။ သို့သော် မဟုတ်ပါ...။
ThuHninSee January 10, 2009 at 12:55 AM
ဆင်ထုံအတွက်နည်းကို စဉ်းစားပေးတဲ့ ကိုဘွိုင်းဇ်အား ချီးကျူးပါတယ်။
shin January 10, 2009 at 2:24 AM
How about writinganew ezlink card system? They are gonna change it toanew one soon. But not very sure which service of new one is better than the current one.
Anonymous January 10, 2009 at 4:38 AM
ဒီမှာတော့ LRT နဲ့ Monorail ကိုအားပြုနေရတာဗျို့။ အသုံးများတာကတော့ KL Rapid ဘတ်စ်တွေပဲ။ ရထားစနစ်က ဒီမှာလည်း အဲ့အတိုင်းပါပဲ။
မီယာ January 10, 2009 at 5:40 AM
ကိုဘ စလုံးရောက်နေပြန်ပြီလား။ ဘာတွေလည်းမသိတော့ဘူး။ စလုံးက MRT စီးရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လင်းထင်း သန့်ရှင်းနေတာပဲ။ တခြားနေရာတွေ ရောက်မှ ပိုသိတာ။
khin oo may January 10, 2009 at 10:21 AM
ရထားတွဲ ၂ တွဲ ကြားက လူက ကြားလဲ မကြားရဘူး။. အခုလို ဆိုတော့လဲ မမြင်ရပါဘူးလေ။ ထူးပါ့မလား.။ မောင်ဘွိုက်စ် ရဲ၊့။
khin oo may January 10, 2009 at 10:23 AM
အဲဒီတွဲ ကြားလေး က စီးလို့ကောင်းတယ်။ လူရှင်းရင် သွားသွား စီးတတ်တယ် .သဘောကျလို့။ လှူပ် လှူပ် လှူပ်နဲ့ ဆော့နေရသလိုဘဲ။ ကလေးများ စလုံးမှာ မြင်းအရုပ် စီးနေသလိုပေါ့။ ပြား ၂၀ မကုန်ဘူးလေ။
Ko Boyz January 10, 2009 at 10:27 AM
- တီသု။ အဲဒီ ဘကုန်းနည်းက အထိရောက်ဆုံးပဲ။ မူပိုင်တီထွင်ခွင့်တောင် မှတ်ပုံတင်ထားရင် ကောင်းမလား မှတ်တယ်။
- Shin - အီးဇီးလင်ခ့်ကဒ်က နေနေလဲ ရေးထားတယ်။ ညီမူယာလဲ ရေးထားတယ်။ နောက်မှာ သွားကူးချလာပြီး ဒီမှာ ကိုယ်ရေးသလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရောကြိတ်လိုက်မယ်။ တိတ်တိတ်နေနော်...။
- ခရေတန်း - ကေအယ်လ်မှာတော့ မစီးဖူးလို့ မသိပါဘူး။ ကေအယ်လ်အိုင်အေနဲ့ ကေအလ် ၂၈ မိနစ်ကြာအောင် စီးရတယ်လို့တော့ ကေအယ်အိတ်က်စပရက်စ် ကြော်ငြာ လက်ကမ်း စာစောင်တွေမှာ တွေ့ဖူးတယ်..။
- မီယာ.. ပြန်ရောက်ပါပြီ..။ ပြန်သွားရဦးမယ်။ နှစ်ကူးကို ပင်လယ်ထဲ ယက်ကန် ယက်ကန် ကူးနေရမယ် ထင်တာပဲ။ စလုံးက ကျဉ်းလေတော့ သူတို့က အားလုံးနေရာစုံအထိ အသေးစိတ် လိုက်လုပ်နိုင်တာပါ။
- အမ်းမား ... တွဲ၂ တွဲကြားရောက်နေပေမယ့် ခေါင်းလေး ဟိုဘက် ဒီဘက် တိမ်းလိုက်ရင် အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်...။
khin oo may January 10, 2009 at 10:29 AM
at Friday, January 09, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar
ez-link card တွေ စပြီး လဲပေးနေလို့ဒီညနေပဲ စီးတီးဟော ဘူတာက လက်မှတ်ကောင်တာ မှာ သွားလဲ လိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် တန်းစီ ပြီးတော့ မှ ကိုယ်တွေ အလှည့်ရောက်တယ်။ လူတွေ ကလည်း အသစ် လဲပေးတယ် ဆိုတော့ တန်းစီကြတာပေါ့။
ရလာတဲ့ ကဒ်အသစ်လေးက စီမ်းပြာလေးပါ၊ ကဒ်ဟောင်းထဲက ငွေတွေကို ကဒ်အသစ်ထဲ ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ နဂို စဘော် ငွေ လို အပေါင် သဘောမျိုး ပေးထားတဲ့ ၃ ဒေါ်လာလဲ ပြန်ထဲ့ပေးလိုက်တယ်။ ကဒ်အသစ် က စဘော်ငွေ သုံးဒေါ်လာ မရှိတော့တဲ့ အတွက် အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စက တော်တော် သတိထားရမယ့် ကိန်းပဲ။ မေ့တတ်ပုံနဲ့ တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။
ကဒ်ထဲမှာလက်ကျန်က ၅ ဒေါ်လာအောက် နည်းနေပြီဆို ကား စီးတဲ့အခါ ကားပေါ်က စက်က စီမ်းဝါရောင်အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၃ ဒေါ်လာရှိမှ ကား၊ရထား စီးသင့် တယ်လို့လည်း လက်ကမ်းစာရွက်မှာ အကြံပေးထားပါတယ်။
ကဒ်အသစ်မှာ ၂၇ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၀၉ ကနေ စလို့ခရက်ဒစ်ကဒ် တွေ ဂျိုင်ယို(Giro) ငွေပေးချေ မှုတွေ နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလိုအလျှောက် ပိုက်ဆံဖြည့်တင်း တဲ့ စံနစ်တွေ ကျင့်သုံးထား နိုင်ပါမယ်တဲ့။ ကဒ်ပျောက် တာတို့ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ နဲ့ မဟုတ်မမှန် အသုံးပြုတာတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အီဇီး ရှီး (EZ-Link CardShield)အကာကွယ် အာမခံ ကို တရက်ကို ၁၅ ဆင့် နဲ့ ၀ယ်ယူ ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဒ်အသစ်က နံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး အီဇီးလင့်ခ် အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ အကောင့်အသစ်ဖွင့် မှတ်ပုံတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မတော်တဆမှုကြောင့် ရာသက်ပန် ဒုက္ခိတ ဖြစ်မှု (accidental Permanent Total Disability insurance coverange) ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အာမခံကို ၆ လ အလကား ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲသလိုများ ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားရင် အလျှော်ငွေ ၅၀၀၀ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။
ကဒ်အသစ်ကို အရင်ကဒ်အတိုင်း သုံးလို့ ရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သုံးလို့ ရနိုင်မယ့် အပြင် မော်တော်ယာဉ်တွေ မှာ သုံးစွဲမယ့် နောက်မျိုးဆက်သစ် စက်တွေမှာလည်း သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁) ကဒ်ထဲမှာ စဘော်ငွေ တပြားမှ ချန်ထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
၂) မော်တော်ယာဉ်တွေ မှာ သုံးစွဲမယ့် မျိးဆက်သစ် လမ်း တံတားဖြတ်သန်းခ စက်တွေ နဲ့ အဆင်ပြေစွာသုံးနိုင်မယ်။
၃) ကဒ်ထဲမှာ အများဆုံး ငွေ ၅၀၀ ထည့်ထားလို့ ရပါမယ်။
၁) အများသုံး ဘက်စ်ကား၊ ရထား များမှာ ချက်ခြင်းသုံးနိုင်ပါမယ်။
၂) ကျောင်းကန်တင်းတွေ ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင် များမှာ ၂၀၀၉ ပထမ သုံးလပါတ်အတွင်း စသုံးနိုင်ပါမယ်။
၃) ဆဲဗင်းအလဲဗင်း ဆိုင်တွေ၊ လမ်းတံတားခတွေ ၊ အက်စ်အမ်တာတီ အငှားယာဉ် တွေ ၊ ကျောင်းစာအုပ်ဆိုင်များ ၊စာကြည့်တိုက် တွေ နဲ့ မက်ဒေါ်နယ် စားသောက်ဆိုင်တွေ မှာ ၂၀၀၉ ဒုတိယ သုံးလပါတ်အတွင်း စသုံးနိုင်ပါမယ်။
၄) အအေး ရောင်းစက်တွေ ၊ ရေကူးကန်တွေ နဲ့ ဆေးရုံတွေ မှာ ၂၀၀၉ တတိယ သုံးလပါတ်အတွင်း စတင် သုံးနိုင်ပါမယ်။
အဲသလို လက်ကမ်းကြော်ငြာ စာရွက်မှာ ဖေါ်ပြပါရှိတာကို အညောင်းခံ ရေးသားရင်း ပို့စ်တခု တင်လိုက်ပါတယ်။
ခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . မြန်မာလိုလေး ရေးပြပေးတော့ ဖတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပြီး ခေါင်းထဲ တခါတည်း တန်းရောက်သွားတာပေါ့ .
Ko Boyz January 10, 2009 at 10:30 AM
အမ်းမား - တွဲကြားမှာ စီးရင် သတိထားစီးပါ။ မတော် တွဲ၂တွဲ ပြုတ်ကျသွားလို့ Mybfriend 4,5,6 တွေ ကျွန်တော်တို့ မဖတ်ရပဲ နေဦးမယ်...။ အဲဒီတွဲနှစ်ခုကို ဆက်ထားတဲ့ သံပြားက အရှင်တွေပါ။ ကျွန်တော်ဆို အဲဒီအပေါ်ကို ရပ်ပြီးတော့ ရထားရဲ့ ဗိုက်ဘရေးရှင်းကို ခံစားကြည့်တာ မဆိုးပါဘူး...။
Ko Boyz January 10, 2009 at 10:33 AM
ခဏနေရင် ကျွန်တော့်ဗားရှင်း လုပ်မယ်...။ ဟိ..။ ၏ နေရာမှာ သည်ပြောင်းတာတို့ ဖြစ်သည် နေရာမှာ ဖြစ်တာပေါ့ တို့ လုပ်ပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ပေးမယ်...။ ဟားဟား
khin oo may January 10, 2009 at 10:33 AM
[Singapore ezlink Cards]
[EZ Link Card]
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2008
khin oo may January 10, 2009 at 10:36 AM
စိတ်မကောင်းဘူး. ကိုဘ အကြံ မသိဘဲနဲ့ ကူညီချင်ဇော နဲ့ ကူညီနေတာ။ အဟိ.။
Ko Boyz January 10, 2009 at 10:40 AM
နို့မို့ ပြန်ပြန် ရှာနေရဦးမျာ...။
သတင်းခေတ်ဆိုတော့လက်ဦးမှု လိုတယ်လေ...။ ဟိ
:P January 10, 2009 at 11:28 AM
ကောင်းလေစွ သဟိုးပါဝါ သရီး
ဇနိ January 10, 2009 at 12:37 PM
ဖတ်သွားကြောင်းထုံးတို့ခဲ့တာ။ ဘာမှ မဟုတ်။
Ko Boyz January 10, 2009 at 12:52 PM
ဆင်ထုံ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနေချိန်တွင် ဆေးရိုးသည် ဝင်မလုပ်ပါနှင့်။ စိန်ပျောက်လျင် အစွပ်စွဲခံရတတ်သည်။ ဘူးသခွားဟားဟား...။
နိနိ - နေကောင်းပါတယ်...။ နဖူးမှာ ထုံးရာလေးတွေနဲ့ ပုဏ္ဏား ဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်...။